Ciidamo ku sugan xeebaha Soomaaliya oo badankood laga helay cudurka Covid19.
Jabhadda TPLF oo Melleteriga Itoobiya ka qabsatay Magaalo muhiim ah [Sawirro].
Sarkaal Yaaqshiid lagu dilayo iyo ciidamo shisheeye oo lagu weeraray Koonfurta Soomaaliya.
Diyaarad Itoobiya laga leeyahay oo kusoo dhacday gobol ay dagaallo ka socdaan.
Duqeyn khasaara dhalisay oo ka dhacday deegaan katirsan gobolka Mudug.
Shacab Soomaali ah oo lagu gummaaday gobolka Sitti iyo dad caraysan oo waddo muhiim ah xiray.
Garoonka diyaaradaha ugu weyn dalka Itoobiya oo la xiray.
Monday July 19, 2021 - 12:29:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Boqolaal askari oo katirsan ciidamada dowladda Koonfurta Kuuriya ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa laga helay caabuqa halista ah e Corona Virus.
War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda difaaca Koonfurta Kuuriya ayaa lagu sheegay in qaar badan oo kamid ah ciidamadeeda ku sugan badda Soomaaliya uu soo ritay caabuqa Covid19.
sida ay baahisay wakaaladda wararka u faafisa wadankaas ee lagu magacaabo onhap News Agency ugu yaraan 247 askari oo Kuuriyaan ah ayaa laga helay caabuqan halista ah iyagoo dul saaran markab ku sugan biyaha Soomaaliya.
Dhaqaatiirta melleteriga Kuuriya waxay xaqiijiyeen in inta badan ciidamadooda ku sugan xeebaha Soomaaliya laga helay Covid19 marka laga reebo 50 askari oo wali caafimaad qaba.
Diyaarad nuuceedu yahay KC-330 Cygnusloo ayaa durbadiiba lagu daad gureeyay askarta la xanuunsan Corona Virus, markabka dagaal ee dowladda South Korea uga qeyb qaadanaysay howlgalka ladagaallanka burcad badeeda ayaa lafilayaa in uu ka shiraacdao biyaha Soomaaliya.
Kumanaan askar reergalbeed ah oo ku sugan badda Soomaaliya ayaa ku howllan boobka kheyraadka ka dhax ceegaaga biyaha iyagoo boor isku qaris ka dhiganaya ladagaallanka 'Argagaxisada' iyo burcad badeedda.
Ciidamo katirsan Xukuumadda Afghanistan oo isku dhiibay dowladda Pakistan.
Ciidamo katirsan maamulka 'Galmudug' oo lagu dilay gobolka Mudug.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu laayay gobolka Cafarta Gaadiidna laga furtay.
Sidee Looga Ciiday Wilaayaadka Islaamiga Soomaaliya Warbixino iyo Sawirro Kala Soco SomaliMeMo.
Ninkii Danish-ka ahaa ee Aflagaadeeyay Nabiga SCW oo halaagsamay.
Video: Jabhadda Tigreega oo weerar cag marin ah ku qaadday kolonyo ciidamo Itoobiyaan ah.
Midowga Afrika oo warbixin kasoo saaray mustaqbalka ciidamadooda Soomaaliya iyo DF oo dhaleecaysay.
Mustafa Cagjar oo sheegay in uu ciidamo Soomaali ah udirayo dagaalka gobolka Tigray.
Daawo: Sida looga ciiday degmada Saakoow ee Jubbada dhexe.
12/05/2021 - 11:33:08
Sawirro: Dad Yahuud ah oo ku dhintay duqeymaha Muqaawamada ee Falasdiin.
11/05/2021 - 17:22:45